बोर्डिङ स्कुल पढाउने अनि फि तिर्दिन भन्ने ? : RajdhaniDaily.com -
Home बिचार बोर्डिङ स्कुल पढाउने अनि फि तिर्दिन भन्ने ?
बोर्डिङ स्कुल पढाउने अनि फि तिर्दिन भन्ने ?
मलाई थाह छ । निजि विद्यालयमा पढाउनेहरुले आनाकानी नगरी विद्यालयले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्छ भन्यो भने दुई/चार दिन समाजमा परिँदैन । अहिलेको सिजन भनेकै निजी विद्यालयको आलोचना गर्ने सिजन हो । अबको केही महिना उछित्तो काढनुपर्छ निजी विद्यालयको । जसरी भारतीय मिडियाले हिन्दु बाहेकको आलोचना गरेर ‘राष्ट्रवादी’ को फोस्रो पगरी गुथ्छन् त्यही गरी हाम्लाई पनि निजी विद्यालयको धुस्नु काढेर असल अभिभाव हुनु छ ।
जसरी विगतका वर्षहरुमा विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले निजी विद्यालयका शुल्कका कुरा उठाउँथे र निजी विद्यालयको विरोध गर्थे । उनीहरुले त्यसरी विरोध गर्नुको उद्देश्य निजी विद्यालयलाई नियामक बनाउनु थिएन । आफ्ना केही कार्यकर्ता र नातेदारलाई केही नाम चलेका निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पठाउनका लागि आन्दोनको नाटक मञ्चन हुन्थ्यो । विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको लगभग दुई सातामा निजी विद्यालयले उनीहरुको माग सम्बोधन गरिदिन्थे । त्यसपछि अर्को चैतसम्म उनीहरु मौन हुन्थे ।
यसपाली निजी विद्यालयको विरोधमा विद्यार्थी संगठनको आवाजको ‘भोलम’ सानै छ । कारण विद्यार्थीको ठूलो संगठन सत्ताको छायाँमा छ भने सत्ता बाहिर भएकाहरु पनि लकडाउन र कोरोना संक्रमणका कारण छिन्नभिन्न छन् । यद्यपि निजी विद्यालयले ‘शुल्क बुझाउन आउ भनेर’ उर्दी जारी गरेको केही घण्टापछि ‘हुन्न भन्दै’ विद्यार्थी संगठनका नेता बोल्छन् पनि । केही थान त विज्ञप्ति पनि निकाले । यो परम्परागत रित हो वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । यसपाली विद्यार्थी नेता भन्दा चर्को स्वरमा अभिभावक आफैं बोले ‘बन्द भएको बेलाको स्कुलको फि तिर्न सकिन्न’ भनेर । शिक्षामन्त्रीले पनि महिनामा दुईवटा जसो विज्ञप्ति जारी गरेर धर्म निर्वाह गरिरहेका छन् ।
चैतको दुई गते विद्यालयको परिक्षा सकियो । परिक्षा सकिनुको अर्थ चैतसम्मको शुल्क अभिभावकले बुझाइसके । चैत १० गतेदेखि लकडाउन सुरु भएको अहिलेसम्म जारी छ । विद्यालय कहिले सञ्चालन हुने हो थाहा छैन । यहि बिचमा केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु पनि गरे । इन्टरनेटको पहुँच हुने बालबालिका अहिले एकाध घण्टा ल्यापटप वा मोबाइलमा क्लास लिए र इन्टरनेट क्लास लिएवापत प्राय विद्यालयले केही दर घटाएर मासिक शुल्क लिइरहेका छन् । शिक्षामन्त्री शुल्क लिन पाइन्न भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नमै व्यस्त छन् । उनलाई थाहा छ । विज्ञप्ति पनि एउटा रित पूरा गर्नलाई हो । निजी विद्यालयलाई पनि थाहा छ । शुल्क बुझाउ भनेपछि अभिभावकले बुझाउँछन् सरकारले कुनै कार्वाही गर्दैन । अभिभावकलाई पनि थाहा छ । इन्टरनेट शीर्षकमा शुल्क बुझाउनैपर्छ । निजी विद्यालयले कुनै हालतमा छोड्दैनन् ।
निजी विद्यालयले दुई दिन अघि विज्ञप्ति निकाल्दै भनेका छन् । सम्पूर्ण निजी विद्यालयमा दुई लाखको हाराहारीमा शिक्षक कर्मचारी छन् । तिनको तलबको मुहान भनेकै विद्यार्थीबाट असुलिने शुल्क हो । तिनले त बैंकको लोन, व्याज र घरभाडाको समेत कुरा गरेका छन् । बजेटमा हाम्रा समस्या समाधानबारे सरकार केही नबोलेको भन्दै हामी ‘उठाउन थाल्छौं’ आशयको कुरा गरेका छन् । सरकारले फेरि भन्यो ‘लिन पाइन्न ।’
विद्यालय शीर्षकमा विद्यार्थीसंग असुल उपर गरेर कमाउने अन्त लगानी गर्ने अनि हामीसंग केही पनि छैन, गरिब छौं भन्ने पनि छन् । तिनका सम्पत्ति छानबिन गरेर प्रचलित ऐन अनुसार अकुत आर्जन गरेको अभियोगमा कार्वाही गर्नुपर्छ ।
निजी विद्यालयको शुल्कको सन्दर्भमा सरकार अहिलेसम्म मात्रै औपचारितामा सिमित छ । अभिभावकका चित्त बुझाउनका लागि मात्रै ‘शुल्क लिन पाइन्न’ भनेर विज्ञप्ति निकालेर बसेको छ । अब यसरी हुन्न । वास्तवमै सरकारले अभिभावकको हित चिताएको हो भने हिम्मतका साथ भन्नु पर्छ । शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिने दायित्व निजी विद्यालय सञ्चालककै हो । बैशाखदेखि विद्यालय सञ्चालन नहुँदासम्म शिक्षक कर्मचारीले खाईपाई आएको तलब एक रुपैयाँ पनि नघटाइदिनुपर्छ । त्यसपछि निजी विद्यालयले भन्न सक्छन् । ब्यापार नभएको बेला कसरी तलब दिनु । अनि सरकारले भन्नुपर्छ । ठिक छ त्यसो हो भने ‘निजी विद्यालयले आर्जन गरेको सम्पत्ति जाँच गर्छौं’ र बास्तवमै नाफा कमाउन नसकेका विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको तलब दिने जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।
भन्ने मात्रै हैन । अहिलेको अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने काम यहि हो । कतिपय निजी विद्यालय गन्गन गर्दैछन् ‘हामीले स्कुल चलाउन सकेनौं ।’ विद्यार्थीबाट शुल्क लिएर पनि कसैले विद्यालय चलाउन सक्दिन भन्छन् भने तिनले सञ्चालन गरेका विद्यालय सरकारले लिनुपर्छ र ती सञ्चालकलाई बैकल्पिक पेशाको विकल्प दिनुपर्छ । नकमाउने विद्यालयको मूल्य सरकारले राखे अनुसार हुनुपर्छ ।
अभिभावक पनि सुध्रिउन्
एकथरि अभिभावकलाई ठूलो भ्रम छ । बोर्डिङ स्कुलमा पठाएपछि छोरा छोरीले १० कक्षामै पिएचडी गर्छन् भने झैं गरेर कलिला बालबालिकालाई झिसमिसेमै उठाउँछन् र स्कुल पठाउँछन् । जाडो महिनामा सडक किनारामा ५/७ किलोको स्कुल ब्याग बोकेर स्कुल बस कुरेर बसिरहेका बालबालिका देख्दा टिढ लाग्छ । तिनका बाबु आमाले आफ्नै सन्तानलाई बाख्राको पाठोको व्यवहार गरिरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । बिहान उठायो, डे«स लगाइदियो, स्कुलको बस चढाएर पठाइदिएपछि उनीहरुको ड्युटी पुरा भयो । अहिले तिनै चर्को स्वरमा कराउँछन् ‘बन्द भएको बेलाको स्कुलको फि तिर्न सकिन्न ।’ तिनलाई म भन्छु ‘नतिरी सुख ? जसरी पनि तिनुपर्छ । राम्ररी नब्युँझेका तिम्रा कलिला सन्तानलाई स्कुल लाने र निश्चित समयपछि आँगनलमा ल्याइदिनेलाई पैसा दिन्न भन्न पाइन्छ ?’
काठमाडौंका अभिभावहरुले अर्को पनि चटक देखाछन् । बालाजुमा घर बनाउँछन् छोराछोरीलाई बानेश्वरको स्कुलमा पढाउँछन् । भत्तपुरमा घर बनाउँछन् हात्तीबनमा पढन पठाउँछन् । कलंकीमा घर बनाउँछन् भक्तपुर पढन पठाउँछन् । यस्ता चटकेहरु कति छन् । आफ्ना छोराछोरीले कस्तो पढ्छन् भन्ने चासो नराख्ने तर, छिमेकीले कत्तिको महंगो स्कुलमा पढायो भनेर चियो गर्दै उसले दुई सय बढी लिने विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रवृत्ति छ
काठमाडौंका टोलटोलमा सामुदायिक विद्यालय छन् । आफ्नो समुदायको विद्यालय सुधार्नुपर्छ भनेर कसैले भन्दैन । कतिपय सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ शैली निजी बोर्डिङ स्कुलको भन्दा राम्रो छ । ति अभिभावक आफ्नै आँगनमा भएको सामुदायिक विद्यालयको विषयमा यति तल्लो स्तरको टिप्पणी गर्छन् । सामुदायिक विद्यालय सुधार्नु समुदायमा बस्ने सबैको दायित्व हो भन्ने कुरा कहिल्यै महशुस गर्दैनन् । काठमाडौंका अभिभावहरुले अर्को पनि चटक देखाछन् । बालाजुमा घर बनाउँछन् छोराछोरीलाई बानेश्वरको स्कुलमा पढाउँछन् । भत्तपुरमा घर बनाउँछन् हात्तीबनमा पढन पठाउँछन् । कलंकीमा घर बनाउँछन् भक्तपुर पढन पठाउँछन् । यस्ता चटकेहरु कति छन् । आफ्ना छोराछोरीले कस्तो पढ्छन् भन्ने चासो नराख्ने तर, छिमेकीले कत्तिको महंगो स्कुलमा पढायो भनेर चियो गर्दै उसले दुई सय बढी लिने विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रवृत्ति छ ।
कोरोना संक्रमण महामारी मात्रै हैन । अवसर पनि हुनसक्छ । अहिले हामी फि तिर्न सक्दैनौं भन्ने अभिभावहरु आ–आफ्ना टोलका सामुदायिक विद्यालयमा जाऔं विद्यार्थी भर्ना गरौं र तिनका सिकाई स्तरका बारेमा चासो राखौं । धेरै कुर्नै पर्दैन तीन महिनामा नतिजा आउँछ । सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो पढाईका लागि दबाब दिने हो भने निजी विद्यालय सञ्चालकको ठूलो डाँको त्यसै रोकिन्छ ।
एमालेको १०औं महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आसन्न १०औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आउँदो २ देखि ६ मंसिरसम्म तोकिएको महाधिवेशनका लागि एमालेले कार्यतालिका...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै...
अक्सिजनः अस्पताल र व्यक्तिले स्टक राख्दा समस्या
काठमाडौं । जुन चिजको बढी हल्ला चल्छ, त्यो चिजको अभाव हुने, लुकाउने, काजोबजारी गर्ने, बढी खरिद गरेर अनावश्यक रुपमा भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन...
मास्कमा कालोबारी गर्ने उद्योगलाई कारबाही
काठमाडौं । मास्कमा अत्यधिक मूल्य लिएर कालोबजारी गर्ने मास्क उद्योगलाई कारबाही गरेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी आएपछि विभागको अनुगमन...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड संक्रमणको साङ्लो चुडाउन अस्पताल र आइसोलेशन मात्रै काफी नहुने भएकाले निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रको...
आमाबाबुको मृत्युपछि दुई बालकको बिचल्ली
गुल्मी । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं ५ धुमीकी पार्वती वि.कले गत पौष ५ गते ट्याक्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाइन् । माइत जान भनेर हिँडेकी...
विश्वकर्मा, सृष्टि र सौन्दर्य
हरेक वर्ष १ आश्विनका दिन श्री विश्वकर्मा भगवान्को पूजा गरिन्छ । देशैभरि भएका ठूलठूला कलकारखाना र ससाना कारखानामा पनि श्री विश्वकर्माको पूजा गरिन्छ ।...
प्रदेश १ Kumar Raut - August 3, 2020 0
आयो तिमीलाई देखेपछि
Not-to-be-missed Kumar Raut - December 31, 2020 0
काठमाडौं । गायिका रचना रिमालको स्वर रहेको ‘तिमीलाई देखेपछि’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। गीतमा निरायु गौतमको शब्द तथा स्वर रहेको छ भने...
अन्तराष्ट्रिय Sushila Bishwokarma - July 13, 2020 0
जेनेभा स्वीट्जरल्याण्ड । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट विश्वभर मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या ५ लाख ७१ हजार ६८९ पुगेको छ । साथै यस संक्रमणबाट...
जग्गा नछाेडेकाे भन्दै देवर र भतिजाले कुटेर दुबै हात भाँचिदिए
प्रदेश Dhruba Lamsal - November 27, 2020 0
सप्तरी, राजविराज । लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेकै बेला सप्तरीमा दुई महिलामाथी निर्घात कुटपिट भएको छ । जिल्लाको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नं....
सर्वोच्चको जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले अदालतलाई धम्क्याउन सुहाउँदैन : प्रधानमन्त्री
Breaking News Sushila Bishwokarma - January 9, 2021 0
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न पार्टीभित्रैबाट असहयोग गरिएकाले आफूले बाध्य भएर...
लकडाउनले दुग्ध क्षेत्रमा दैनिक १० करोडको क्षति
अर्थ Kumar Raut - June 3, 2020 0
काठमाडौं । लकडाउनका कारण दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा दैनिक १० करोड क्षति भइरहेको छ । दैनिक ३१ लाख लिटर उत्पादन हुने दूधले लकडाउनकै कारण बजार...
आज २९९ औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस
Breaking News Kumar Raut - January 11, 2021 0
काठमाडौं । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको २ सय ९९ औँ जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस आज मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । सरकारी तहबाट...
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राय दिन पाँच जना ‘एमिकस क्युरी’ चयन
Editor-Picks Dhruba Lamsal - January 3, 2021 0
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राय दिन नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पाँच जना ‘एमिकस क्युरी’ चयन गरेको छ । नेपाल...
१७ फिट अग्लो अरनिको !
Editor-Picks Kumar Raut - December 18, 2020 0
काठमाडौं । टाउकोदेखि छातीको तल्लो भागसम्म प्लास्टिक बेरिएको छ । एक पाइला अघि सार्दै गरेकोझैं देखिने बडेमान अरनिको अहिल्यै हि“डुलाझैं भंगीमा उभिएको छ ।...
जीप दुर्घटनामा प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँचको मृत्यु
Breaking News राजधानी संवाददाता - April 14, 2021 0
दाङ । प्युठानको स्वर्गद्वारी जाँदै गरेको जीप दुर्घटना हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । बुधवार बिहान भएको...
फूलबुट्टे सारी सर्वोत्कृष्ट
राजधानी समाचारदाता - April 30, 2021
विवेक विवश रेग्मी - May 3, 2021
चितवनका एकसहित तीन सङ्क्रमितको मृत्यु
युवा संघको प्रश्न, सरकार कहाँ छ ?